Sirdoonka USA: Russiya dhib kuma qabto cunaqabataynta xilligaan saaran – Kasmo Newspaper
Sirdoonka USA: Russiya dhib kuma qabto cunaqabataynta xilligaan saaran
Updated - March 9, 2018 3:38 pm GMT
London (Kasmo), ‘Russiya wax dhibaato ah kuma qabto xilligaan cunaqabataynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee Maraykanka iyo Midowga Yurub ku hayaan, ilaa ugu byaraan, xad ay wax ka beddesho qaabka ay ula dhaqanto reer Galbeedka’.
Warkaan kama soo bixin ilowareed Ruush ah laakiin wuxuu ka soo yeeray Dan Coats, Agaasimaha Sirdoonka qaranka Maraykanka.
Warbixin uu ku qiimaynayo halista caalamiga ah ee Maraykanka oo soo baxday Talaadadii, Coats wuxuu qiray in Russiya, wakhtigaan la joogo, cunaqabatayntu ugu fadiyin wax dhibaato ah. Intaa waxaa sii dheer, Dokumentiga Agaasimaha oo qoraya in Russiya sannadkaan qaadi doonto hawlgallo Internetka ah oo ka sii burbur badan kuwii horey loo arkay, looguna gaystay dalalka NATO.
Warbixinta Coats waxaa ku qeexan in hay’adaha sirdoonka Russiya sii wadi doonaan sidii ay ugu dhici lahaayeen gunta kaabayaasha xasaasiga ah ee Maraykanka iyo dalalka bahwadaagta la ah, si u helaan macluumaad ku saabsab siyaasadda USA oo ay u adeegsadaan danahooda.
Coats wuxuu rumaysanyahay in haddii Vladimir Putin dib loo soo doorto uu bilaabi doono siyaasad dibadeed oo daandaansi ku dhisan oo dhacdooyinka dunida ka saamaysa dibadda Russiya.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in Moskow is-kaashi kala samayn doonto Washington, meelaha qur ah ee danaheedu ku jiraan, iyada oo wadi doonta tabo daandaansi ah, si ay isugu muujiso quwad weyn (Super Power), loona daciifiyo Maraykanka iyo bahda NATO.
Sirdoonka Maraykanka ayaa walaac ka qaba faragalin uga timaadda Moskow oo lagu sameeyo doorashooyinka ‘Mid Term elections’ ee 2018ka, Warbaahintuna waxay maalmihii la soo dhafay qoraysay in Xoghayaha Maaliyadda Maraykanku ku dhawaaqay qorshe cunaqabatayn dheeraad ah lagu saari doono Moskow toddobaadyada soo socda.
Bartamihii Febraayo, Wasaaradda Caddaaladda Maraykanka ayaa eedo dacwado ah u soo jeedisay 13 qofood oo Russiya u dhashay, kuwaas oo lagu eedeeyay faragalin in ay ku sameeyeen doorashooyinkii 2016, laakiin Moskow ayaa eedahaas horey isaga fogeysay.